Iwu kuki - Storelọ ahịa ASFO
Kuki bụ faịlụ nwere ọtụtụ ozi nke ebudatara na ngwaọrụ gị mgbe ị gara na weebụsaịtị.
Gịnị bụ kuki maka?
Ha na-enyere websaịtị aka icheta ozi gbasara ọbịbịa gị, dịka asụsụ ị masịrị na ntọala ndị ọzọ. Nke a nwere ike ime ka ọbịbịa gị ọzọ dị mfe ma mee ka weebụsaịtị wepụtara gị uru. Kuki na-arụ ọrụ dị mkpa. Na-enweghị ha, iji web ahụ ga-abụ ahụmịhe na-egbu mmụọ. Kuki na-abawanye arụmọrụ nke ụzọ ntanetị. N’ezie ị tinyelarị ihe na ngwaahịa ịzụ ahịa n’ime ụlọ ahịa dị na ntanetị, mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, mgbe ị laghachiri na weebụsaịtị, ị achọpụtala na ihe ahụ ka dị na ụgbọ gị? Nke a bụ otu ihe atụ nke ojiji kuki.
Gịnị kpatara eji eji kuki eme ihe?
Ojiji kuki jiri ịntanetị dị nkịtị ma ọ dịghị emerụ kọmputa niile nke ndị ọrụ. Kuki na-arụ ọtụtụ ọrụ, gụnyere inyere ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ aka ịghọta otu esi eji ya site na ịnye usoro ụzọ ya, gụnyere ịchekwa mmasị ha na kwalite ahụmịhe nke onye ọrụ ha yana hụkwa na weebụsaịtị gosipụtara gị ọdịnaya dị mkpa.
Saịtị anyị na-eji ụdị kuki ndị a: kuki ndị na-adịgide adịgide - Ndị a bụ kuki echekwara na ọkwa ihe nchọgharị gị na ngwaọrụ nnweta gị (pc, mkpanaka, na mbadamba) ma a na-eji ya mgbe ọ bụla ị gara na websaịtị anyị. Kuki nnọkọ - Ndị a bụ kuki na-adịru nwa oge nke na-anọgide na kuki kuki gị ruo mgbe ị hapụrụ weebụsaịtị. Ozi nke kuki ndị a nwetara na-enyere aka nyochaa usoro okporo ụzọ weebụ, na-enye anyị ohere ịchọpụta nsogbu ma nye ahụmịhe nchọgharị ka mma.
Ụlọ ahịa ASFO
Nka na ụzụ Nduzi: Dra. Ligia Sousa
Flọ ahịa ASFO, nke nwere isi ụlọ ọrụ na Avenida Sidonio Pais, 379, 1.13.lọ 4100, Porto, 468-XNUMX.